टिन टाई निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरु संग चीन फ्लैट तल पाउच - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > फ्ल्याट बटम पाउच > टिन टाईको साथ समतल तल पाउचहरू
टिन टाईको साथ समतल तल पाउचहरू
चीनमा प्याकेजिङ पाउचहरू उपलब्ध गराउने 14 वर्षको समृद्ध अनुभव, RJ PACK ले तपाईंलाई टिन टाईसहितको फ्ल्याट बटम पाउचहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। टिन टाईको साथ फ्ल्याट बटम पाउचहरू तपाईंको खाना उत्पादनहरू प्याकेज गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। टिन टाईहरूले तपाईंको उत्पादनमा मूल्य थप्छ किनभने उपभोक्ताहरूले यो पुन: मिलाउन मिल्ने सुविधा मन पराउँछन्। उच्च गुणस्तर र चिपकने सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। चीनमा तपाईको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने आशा छ।
टिन टाईको साथ फ्ल्याट बटम पाउचहरू तपाईंको खाना उत्पादनहरू प्याकेज गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। टिन टाईहरूले तपाईंको उत्पादनमा मूल्य थप्छ किनभने उपभोक्ताहरूले यो पुन: मिलाउन मिल्ने सुविधा मन पराउँछन्! उच्च गुणस्तर र चिपकने सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ,
1. टिन टाई परिचयको साथ फ्लैट तल पाउचहरू
टिन टाईको साथ फ्ल्याट बटम पाउचहरू: टिन टाईले अतिरिक्त मेसिनरीको आवश्यकता बिना नै कडा बन्द प्रदान गर्दछ। टिन टाई दबाब संवेदनशील र हातले प्रयोग गर्न सजिलो छ, सानो भोल्युम उत्पादनहरू प्याकेज गर्न ठूलो सुविधा प्रदान गर्दछ। टिन टाईको टाँस्ने झोलाको शीर्षमा दृढतापूर्वक संलग्न हुन्छ, तपाईंको उत्पादनको लागि सील विकल्प प्रदान गर्दछ। कफी, चिया, कपकेक, मिठाई सबै लामो समय टिक्छ।
2. उत्पादन प्यारामिटर (विशिष्टता)
आकार र मोटाई
अनुकूलित, 0.5oz देखि 30kgs
टाई टाईको लम्बाइ
120mm देखि 480mm सम्म
PET, PA, PE, BOPP, CPP, VMPET, Foil आदि। सबै खाद्य ग्रेडमा र EU र FDA मानक अनुरूप।
उन्नत उपकरण र अनुभवी QC टोलीले ढुवानी अघि प्रत्येक चरणमा सामग्री, अर्ध-समाप्त र समाप्त उत्पादनहरू कडाईका साथ जाँच गर्नेछ।
3. टिन टाई सुविधा र अनुप्रयोगको साथ फ्लैट तल पाउचहरू
१) सुरक्षा खाद्य ग्रेड सामग्री (FDA र EU अनुमोदित) र सही मुद्रण
२)। चुहावट रोक्नको लागि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नमी-प्रूफ
३)। बलियो सील तल र टिकाऊ प्रेस-अन जिपर
४)। पेपर टच वार्निश
५) टिन टाई भएको फ्ल्याट बटम पाउचहरू प्याकिङ स्न्याक्स, पाल्तु जनावरको खाना, कफी, चिया, मसला, चामल आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
4. टिन टाई विवरणहरू सहित समतल तल्लो पाउचहरू
त्यहाँ5प्यानलहरू छन् - अगाडि, पछाडि, बायाँ गसेट। दायाँ गसेट र तल्लो गसेट
प्रेस-अन जिपर खोल्न र बन्द गर्न सजिलो छ।
5. टिन टाई योग्यताको साथ फ्लैट तल पाउचहरू
हामीले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू FDA र EU स्वीकृत छन्, र हाम्रो कारखानाले BRC र ISO प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ।
6. टिन टाईको साथ फ्ल्याट बटम पाउचहरूको डेलिभरी, ढुवानी र सेवा
नेतृत्व समय लगभग 10-20 काम दिन लाग्छ, र यातायात समय विभिन्न क्षेत्रहरु अनुसार अनुमान गरिएको छ। सबै सामानहरू ढुवानी गर्नु अघि पूर्ण निरीक्षण हुनेछ।
१) एक्सप्रेस द्वारा (3-5 कार्य दिन), तत्काल समय र सानो मात्रा को लागी उपयुक्त।
२)। समुद्र द्वारा (15-30 दिन), नियमित मास उत्पादन को लागी उपयुक्त।
३)। हवाई द्वारा (5-7 दिन), एयरपोर्ट देखि एयरपोर्ट सम्म।
1. तपाईंको डेलिभरी समय कति लामो छ?
म टिन टाई संग फ्ल्याट तल्लो पाउच को अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लाग्नेछु
2.तपाईंसँग के प्रमाणपत्रहरू छन्?
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग टिन टाईको साथ यी वातावरणीय फ्ल्याट बटम पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू छन्।
3. तपाईको कम्पनी स्थापना भएको कति वर्ष भयो?
हाम्रो कम्पनी 2003 मा स्थापित
4 तपाईको MOQ के हो
पाउचको लागि 10,000 पीसी र फिल्मको लागि 200 ग्राम
5 के तपाईको विदेशमा कार्यालय छ?
होइन, हामी चीनमा कारखाना हौं र हामीसँग विदेशमा कार्यालय छैन
6 तपाईं एक कारखाना हो र तपाईं प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी अनुभवी कारखाना हो जुन लगभग 20 वर्ष को लागी खडा छ। हामीसँग तपाइँको उत्पादनहरु को लागी प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदान गर्न को लागी समृद्ध अनुभव छ।
7 तपाईको मुख्य उत्पादनहरू के हो?
हाम्रा उत्पादनहरूमा स्ट्यान्ड अप पाउच, गसेट ब्याग, फ्ल्याट बटम पाउचहरू, २/३ साइड सिल ब्याग, स्पाउट पाउच र रोल स्टक फिल्म, आदि समावेश छन्। र हामीसँग पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोष्ट गर्न मिल्ने PTC जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू उत्पादन गर्ने प्रशस्त अनुभव छ।
हट ट्याग: टिन टाई, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीन, चीन, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, CE, FDA, थोक, खरिद, अनुकूलित, थोक, सस्तो, छुट, कम मूल्य, फेसन, सबैभन्दा नयाँ, गुणस्तर, उन्नत, नवीनतम बिक्री, फैंसी, वातावरणीय
तातो मुद्रांकनको साथ समतल तल पाउचहरू
भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल पाउचहरू